I-Tiger yokuqala yePGA yePig Tour: Yenzeke apha
Ngabe iTiger Woods yaphumelela nini kunye nomqhubi wokuqala wePGA Tour ? Kwenzeke ngo-1996 i- Las Vegas Invitational , eyenziwa ngo-Oktobha 6, 1996.
I-Woods yayineminyaka engama-20 ubudala ngelo xesha kwaye yayisisiqalo sayo sesihlanu nje kwisiganeko se-PGA Tour ukususela ekuguquleleni. Le midlalo yenzeke ngo-Oktoba 2-6, idlala kwikhosi ye-golf ye-TPC Summerlin.
Indlela Amatye abonayo ngayo ngo-1996 i-Las Vegas Invitational
I-1996 i-Las Vegas Invitational yayiyi-five rounds in length, i-holes 90.
I-Woods yavulwa nge-70, kodwa ukususela kuloo ndawo ekutshweni komlilo: I-Woods yafumana amanqaku angama-26 ngaphantsi kweemigodi ezigqibeleleyo ezingama-72.
Kwinqanaba lesibini, i-Woods yaxoshwa ngamanqaku angama-63. Emva kokujikeleza kwe-68, i-Woods yafudukela kwi-Top 10. I-67 kwi-Round 4 ibeka i-Woods ibe yintambo yendawo yesixhenxe, imivimbo emine ekhokelayo.
Ingqungquthela yokugqibela engama-64 ibeka i-Woods kwindawo yokuphumelela, kodwa i- Davis Love III yaqalisa i-15 kwaye yavutha izimbobo ezili-16 ukuze zibophe izinkuni. I-Woods noLuthando bagqibe umgaqo kwi-27-phantsi kwe-332.
I-Woods kunye noThando bangena ngokukhawuleza kokufa, kodwa Uthando lufumene i-bunker greenside kwisiqalo sokuqala esingaphezulu kwaye lwahluleka ukuvuka-kunye-phantsi . Oko kwanika i-Tiger amabini i-putts ukuze iphumelele, kwaye u-Woods wabiza ukunqoba kwakhe kobugcisa bokuqala. (Uthando lwalusisigxina se-PGA Tour yexesha eli-10; waqhubeka uzuze izihloko ezi-21 zezemisebenzi kwaye ufumana ubulungu kwiHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama.
I-payer's paycheck yayiyi-$ 297,000. Uloyiso lwafumana i-Woods ibhokhwe kwi- Masters ka - 1997 - eyayilawula ukuba iphumelele ekuphumeleleni kwayo yokuqala kwiminyaka ebalulekileyo kunye nobuneminyaka emibili kwi-PGA Tour.
Okuqinisekisiweyo ukuba i-Woods ayifuni ukuba ihambe ngeQ-School ukufumana ubulungu bohambo.
Iibhodi ezingama-323 ezidibeneyo kwi-tee ngexesha lomqhudelwano, okwakuneeyure ezingama-13 ubude kunomdlali ozayo emva kweveki, kunye neeyari ezingama-40 ezide kunexesha eliphakathi kwendawo.
Ukuqhubela phambili kwi-Woods 'yokuqala yePGA Tour Win
Umqhubi wokuqala wePGA Tour emva kokuguqulwa kweprojekthi kwakuyi-Greater Milwaukee Open ye-1996, eyenziwa ngo-Septemba.
1. Wadlala kwii-tournaments ezine ngaphambi kokuphumelela kwakhe kokuqala, kwaye wagqiba phezulu kwisiganeko ngasinye esilandelayo:
I-Tournament Inkcazelo yokugqibela Indawo
1996 Greater Milwaukee Vula 277 (ngaphantsi kwe-7) eboshwe 60
1996 iBell Canadian Open 208 * (8-ngaphantsi) 11
1996 Quad City Classic 272 (8-ngaphantsi) eboshwe 5
1996 BC Vula 200 * (13-ngaphantsi) luboshwe 3
(* mfutshane ukuya emathanjeni ama-54 ngemvula)
Emva kokuphumelela kwakhe kwiLas Vegas Invitational, Woods wadlala ii-PGA Tour tournaments kwixesha lakhe le-rookie: Wagqiba okwesithathu kwiLaCantera Texas Open, wayinqoba iWalt Disney World / Oldsmobile Classic kwaye wayeneminyaka engama-21 kwi-Tour Championship.
Abadlali beGoli kunye neNtshontsho kakhulu kwiLPGA Majors
I-Gymnastics yama-Olimpiki: Imigaqo yeGymnastics yamadoda, Ukulinganisa, nokugweba
Indlela yokudibanisa "uMququzeleli" (ukuhlela) ngesiFrentshi
Ingcwele Ngomnye NgoLwesine Umhla Wokunyanzeliswa?
Qalisa Ubulungile Injongo - Imfihlelo Yobunene
Ukubulawa KwamaRoma ngokuxhatshazwa kwiDwala laseTarpeian